उपचारको क्रममा मृत्यु भएका विन्दवासनि गाऊँपालिकाका सचिव मुकेश चौरसिया ।
पर्साको बिन्दवासिनी गाऊपालिकामा नगर कमिटीको सपथ ग्रहण कार्यक्रममा भएको झडपमा गम्भीर घाईते भएका मुकेश चौरसियाको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको छ ।
नेकपा पर्सा अध्यक्ष प्रभु हजरा र सचिव बिजय महतोको दुई समूहमा विभाजन भएको नेकपाको कार्यकर्ताबीच सपथ ग्रहण कार्यक्रममै विहिबार कुटाकुट भएको थियो ।
मृत्यु भएका चौरसिया विन्दवासनि गाऊँपालिकाका सचिव हुन् । कुटाकुटमा दुवैतर्फबाट दर्जनबढी घाईते भएका थिए । भने गम्भीर घाईते भएका मुकेश चौरसियाको उपचारको क्रममा पानीटंकीस्थित एल.एस.न्यूरो हस्पिटलमा मृत्यु भएको छ । कुटपिटले मुकेशको टाउँकोमा गम्भीर चोट थियो ।
अर्का घाईते उत्तम तिवारीको उपचार नारायणी अस्पतालमा भईरहेको छ । उनको अवस्था चिन्ता जनक रहेको नारायणी अस्पतालका प्रवक्ता डा. अतुलेश चौरसियाले जनाकारी दिए । उनको पनी टाउको मै चोट लागेको छ सघन कक्षमा उपचार भईरहेको डा. चौरसियाले बताए ।
नेकपाका केन्द्रिय सदस्य नागेन्द्र चौधरीको प्रमुख अतिथिमा भईरहेको कार्यक्रममा नेकपा केन्द्रिय सदस्य रामचन्द्र साह लगायतको उपस्थिति रहेको थियो । घटनाबारे पर्सा प्रहरीले पुर्व सांसद राजकुमार गुप्तालाई उनको आफनै घरबाट नियन्त्रणमा लिएको थियो भने, साझ वृस्तृत जानकारी लिई छोडेका छन् ।
ज्यान मार्ने उदेश्यले भएको आक्रमणमा विहिबार साझ पुर्व सांसद गुप्ता सहित उनको घरबाट ८ जनालाई नियन्त्रणमा लिएको थियो । अनुसन्धानका लागी नियन्त्रणमा लिएको पुर्व सांसदलाई प्रहरीले राति रिहा गरेको पर्साका प्रहरी नायब उपरिक्षक मनोजित कुँवरले बताए ।
घटनामा संलग्न रहेको मध्ये ३ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । पक्रऊ पर्नेमा देवा सहनी, सुकवीन गद्दी र अनिस मिया रहेका छन् ।
#कुटाकुट #सार्वजनिक स्थलमै कुटाकुटा #नेकपा कार्यकर्ताबिच झडप
शुक्रवार, कार्तिक ७, २०७७, ११:१०:००